နွေလင်းဟန် ရဲ့ “လူသားအခွင့်အရေး၊ လွတ်လပ်မှု၊ လုံခြုံမှုနှင့် ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု”… – PVTV Myanmar
နွေလင်းဟန် ရဲ့ “လူသားအခွင့်အရေး၊ လွတ်လပ်မှု၊ လုံခြုံမှုနှင့် ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု”…
·5months ago ·27 Comments
နွေလင်းဟန် ရဲ့ “လူသားအခွင့်အရေး၊ လွတ်လပ်မှု၊ လုံခြုံမှုနှင့် ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု” အမည်ရ နိုင်ငံရေးအတွေးအမြင်ဆောင်းပါးကို နားဆင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။
Like – 5.6K Share – 433
Joom Loop says:
2021-08-24 at 6:36 PM
NUG ကပြီးခဲ့တဲ့ရက်က D DAY
ပါတယ်၊ D DAY ကိုဖြစ်လာမှဘဲ
2021-08-24 at 6:46 PM
Myo Oo Myo Oo says:
2021-08-24 at 7:09 PM
Cho Pyone says:
2021-08-24 at 7:11 PM
Social Hotspot says:
Maung Naing says:
2021-08-24 at 7:26 PM
Pwint War says:
Thazin Naing says:
2021-08-24 at 7:46 PM
Peter Khai says:
2021-08-24 at 8:10 PM
_|_ မင်းအောင်လှိုင် မအေလိုး🌚
စိန္ ခင္ ခက္ says:
2021-08-24 at 8:22 PM
2021-08-24 at 8:25 PM
2021-08-24 at 8:30 PM
Thurein Win says:
2021-08-24 at 8:39 PM
လွမ်း ဇေ မောင် says:
2021-08-24 at 9:34 PM
တရုတ်က မြန်မာပြည်အတွတ်လက် မဲကြီးဘဲ အဲဒီလက် မဲကြီးကို အဓိ့ကထား ဖြတ်ရမယ်
2021-08-24 at 10:13 PM
NUG crph နိုင်ရမည်
ၾကယ္ စင္ လင္းလက္ says:
2021-08-24 at 10:16 PM
2021-08-25 at 7:03 AM
P V T ခင်များတို့ဗျား နာမည်လေးရလာချိန်မှာ ခုလိုစကားမျိုးပြောတာကတော့ သိပ်ကိုအောက်တန်းကျသွားတာဘဲ ။
အရင်ကတော့ (ချစ်လိုက်ရတာ) ခင်များကို ခုကြတော့ဗျား,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,လုပ်ရက်လိုက်က အဲ့လိုမျိုးအချားသူကို ပုတ်ခနေခြင်းကိုက ခင်များတို့ရဲ့ တက်လမ်းကို
အောက်ကျနောက်ကျစေတာဘဲလို့ဆိုတာကိုကောတွေးမိကြသေးလား?မင်းအောင်လိုက်ကိုတိုက်နေတာပါဆိုရင်လည်း ပစ်မှတ်ကတစ်ခုတည်းဖြစ်ရမှာလေး (ခုကြ)
PVT ဒါလေးကို အပြုမြင်သဘောထားပေးပါဗျား ။ အရေးတော်ပုံ အောင်နိုင်ပါစေ။။။
2021-08-25 at 7:11 AM
ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပေးကြပါ အမျိုးသမီးတွေအတွက် လုပ်လို့ရပါတယ်
2021-08-25 at 7:17 AM
P V T ဘာလဲ? ဒင်းတို့က
အမျိုးသမီးတွေကို မလုံမခြုံ၀တ်စေပြီး နာဘူးကြဦးမလို့လား?
ဒင်းတို့ဗျား ဒင်းတို့ရဲ့မလုံမခြုံ၀တ်ထားတဲ့ သမီးမိန်းခလေးတွေကို နာဘူးကြတဲ့အရှူ့တွေနဲ့ ကြည့်ရှူ့ခံခြင်နေလို့လား အာ့လုပ်ကွက်တွေကိုက အမျိုးသမီးအခွင့်ရေးတွေကို ခြိုးဖောက်နေတာပါ။ အမှန်တော့အမျိုးသမီးက စိန် ရွှေ ရတနာ တန်ဖိူးကြီးတဲ့အရာတွေကို တန်ဖိုးရှိရှိ သိမ်းထားတတ်ကြတာကြီးဘဲလေး။ အပြုမြင်သဘောဖြစ်ဖတ်ပါရန်။ အရေးတော်ပုံ အောင်ရမည်။ ။ ။
2021-08-25 at 7:23 AM
PVT သူများကို ပုတ်ခပ်ပြီး
အရေးတော်ပုံ အောင်နိုင်ခြင်နေတဲ့သဘောလား ?
2021-08-25 at 12:11 PM
အကိုရာ မိေကါင္းဖခင္က ေမြးတဲ႕သူတိုင္း ဒီအစီအစဥ္ကို နားေထါင္ျပီး ျပည္သူ ့အစိုးရသါလ်ွင္အမွန္ျဖစ္သင့္တယ္လို့ ခံစါးနားလယ္ျကမွာပါ
လံုး ေလး says:
2021-08-25 at 4:00 PM
2021-08-28 at 5:13 AM
အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအဖွဲ့ ပုံမှန်အစည်းအဝေး (၂၀/၂၀၂၁) ကို ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့…
NUG Press Conference (4/2021)…